पानी परे पनि किन गर्मी कम हुनसकेन ? « On Khabar
पानी परे पनि किन गर्मी कम हुनसकेन ?
देशका धेरै ठाउँमा बिहानैदेखि गर्मी छ । बेला-बेलामा वर्षा भइरहे पनि गर्मी बढेको छ।
तापक्रमसँगै वायुमण्डलमा सापेक्षिक आर्द्रता बढ्दा गर्मी बढेको मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हिजो काठमाण्डौको तापक्रम ३१ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । यसले गर्दा काठमाण्डौमा गर्मी महसुस भएको थियो । हिजो दिउँसो काठमाण्डौमा घाम चर्किएको थियो । बेलुका पानी परे पनि गर्मी भने कायमै थियो ।
मौसमविद् पौडेल भन्नुहुन्छ : ‘वायुमण्डलमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा सापेक्षित आर्द्रता पनि बढ्दै जान्छ । वायुमण्डलमा सापेक्षित आर्द्रता बढ्दा गर्मी बढ्छ ।’ मौसमविद्का अनुसार वायुमण्डलमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी पानीको मात्रा भए सापेक्षित आर्द्रता बढेको मानिन्छ ।
अहिले वायुमण्डलमा ९०–९५ प्रतिशतभन्दा धेरै पानीको मात्रा रहेको मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो । मनसुन केही कमजोर हुँदा हिजो र अस्ति काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशका धेरै ठाउँमा कम पानी परेको छ । केही ठाउँमा एकै पटक ठूलो पानी परे पनि धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको मात्रै वर्षा भएको छ ।
पानी परेका ठाउँमा केहीबेर शीतल भएको महसुस गरिए पनि गर्मी भने घटेको छैन । हिजोको तुलनामा आज भने गर्मी केही कम हुने अनुमान छ । आज दिउँसो पछि मनसुन फेरि थप सक्रिय हुने सम्भावना रहेको मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो ।